FALANQEYN: Hoggaamiyaasha ku shirsan Muqdisho & Caqabadaha waa weyn ee horyaala!
April 6, 2021 Xuseen 6
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Waxaa maanta baaqday shirkii madaxda dowladda federalka ah iyo dowlad goboleedyada dalku ay maanta ku yeelan lahaayeen magaalada Muqdisho gaar ahaan Teendhada sida weyn loo ilaaliyo ee AFISYOONE.
Sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee SONNA baaqashada shirka waxaa sabab u ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo maalinimadii shalay safar ugu ambabaxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkiisa.
Berri ayaa lafilayaa in shirku markale dib u furmo xilli wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay Magaalada Muqdisho ay ku cadaadinayaan madaxda Soomaalida inay gaaraan heshiis isla markaana ay xal u keenaan doorashooyinka guud ee dalka, haddii kalena tallaabooyin cunaqaybatayn ah laga qaadi doono.
Faaqidaaddeena maanta waxaan ku eeggi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha shirka, qorshayaasha beesha caalamka, muxuu midwalba doonayaa madaxda DFS iyo dowlad goboleedyadu, ma u tanaasuli doonaan danaha dalka iyo dadka Soomaaliya & arrimo kale.
Somaliyey warka qowsaarada ha la’iska daayo wadanka dowlad ayuu leeyahay hadii doorasho la diido macnaheeda waa mida hada joogta hasii joogto, wakiilada ufadhiya kenya iyo emarite wadanka somali (deni iyo madoobe) waxaa hasyta labo daran mid dooro ! ee shaxda farmaaje waa mid ka horeysaa 20 sano hada kadib kkkkkk
Marka hore afeef
Somalida waxaa dilooday qabyaalda
Marka la akhriyo fekerkayig waxaan loo fahmi doona inaan reer ahaan u hadlayo.maya deni 7 oday baan isu jiran.
Qorakan waxaan ku soo gudibinaya fekerkayiga
Madaxda somalida ku shirsa waa farmaajo sii haya mw.rooble sii haya rw, deni m p, goorgoor,m g,laftgarern kg guudlaawe m hs, axmed m jl
1) wixii dhacay 19 February cid sidi gar ah loogu wakiishay ma jirto.
Xildhibaanada reer waqoyi cid si gar ah loogu wakiishay ma jirto
Soo noqoshada farmaajo waa mid ku xiran xag rabi ima jeclow ima nebcow taaso waa rabaani.
Waxaan loo baahan yahay in aad masuuliyd muujisid dalka ku xagee maanta ku sugayey yahay.
Runta ayaad taabateen.
Deni iyo Madoobe oo ah laba damiin xaga siyaasadda wuxu ka saxeexay heshiis laga baaraan degay oo loo qurxiyay waana saxeexeen iyagoon fahmin nuxurka heshiiskaba.
Goor dambe oo bilo laga joogo ayaa shaxda loo jilciyay,ayna baraarugeen.
Hadda lafteeda lama yaqaan waxay doonayaan siiba DENI,Madoobe Gado ayaabu Ku doodiye!!!
R/wasaare miyuu rabaa?
Ma wakiil shisheeyaa??
Heshiis la saxiixay waa fulin uun waxa xigaa,mana la maqal waa laygu siray,sidaas ma moodayn,ma fahamsanayn iwm.
Gaas iyo Faroole kama dambeyn hogaamin almiino waxay yaqaaneen waxay ka doonayaan heshiisyada ay gelayaan,laakiin intaad heshiis saxeexdo waan ka noqday lama arag oo lama maqal.
Mushkiladu waa laba uun
1-Nidaamka Federaalka oon la fahmin,waajibna tahay in la tuuro
2-Hooyada iyo aabaha Federaalka oo gacanta dawlada la soo geliyo xoog iyo xeeladba,hadii sidan lagusii Jirona dal sii jirimaayo.
Caqabad aan Deni ahayn ma hortaagna xal laga gaadho doorasho dalka laga qabto.
Madaxweynuhu waa fadhiyayaa hadii la diido doorasho.
Xubnaha 275 ka ah ee golaha shacabka reero ayaa iska leh,soon a xulanaya,waxayna Ku imanayaan nidaamka beelaha ee 4.5 ,mana jirto sabab maamul isbaaro ugu dhigtaa.
Aqalka sare ayaa maamullo lagu qaybsaday 54ta xubnood.
Markay beeluhu soo xulaan xildhibaanada ciddii ay codkooda siinayaan ayakaa u door leh kolba musuq iyo lacagta carabta ayaa madaxweyne lagu noqonayay oo waa la ogaaye.
Maamulku xubnaha degaamadiisa haduu rabo ha yiraahdo musharax hebel doorta e waa haduu iibsan karo e.
Meeshan wax weyn ayaa qaldan.
Waxay u egtahay in xukuumada hadda joogtaa ka diyaargarowday siday kusoo laaban lahayd,badi codka maamuladana gacanta ugu jiro iyadoon cidna khasbin oo 1-Galmud,Hirshabeele,Koonfur galbeed,Banaadir,xubnaha Woqooyi ee Xamar lagu doorto xageeda yihiin.
WAA MUUQATAY SANADO KA HORBA MARKAY BEDELAYSAY MADAXDII MAAMULADA HADDA LA SAFAN,UNA DHIIBAYSAY RAG AY WADATO UJEEDKA KA DAMBEEYA WAA MUUQDAY.
Mida ka muhiimsan waa hawadii dalka ee ay la wareegtay oo u sahashay inay maamulaan hawada dalka,lana socdaan diyaarada ka degaysa meel dalka ah siiba inta federaalka xubnaha ka ah,hawadana ka celinayso iyadoo sharciyada dalka haysata diyaaraddii ay uga shakiyaan inay sido lacagtii malaayiinta doollar ahayd ee dawladaha carabtu kasoo dejin Jireen garoomada dalka,iyagoo u wada musharax ay rabaan inuu soo baxo,waana midda diyaaraddii dhawaan laga celiyay GARACAD sababtay,iyadoo dawladu tuhuntay maadaama ay Imaaraadka ka timi ay lacag u sido musharax gaar ah ama mucaaridka Farmaajo,lagana fogaynayo magaalooyinka waaweyn sida Garowe oo si sahlan lagu ogaan karo lacagta la keeno.
Midda kale musharaxii lacag Garowe ugasoo degto maadaama aan Xamar laga dejin Karin,dawladuna la wareegayso sidii hore u dhacday ee Imaaraadku uga baxay Muqdisho ma doonan karo,lagana yaabaa in dawladu Ku xayirto Muqdisho,Pudlandna uma dhiibayaan,mana gudbin karaan oo xataa ma xawili karaan oo si dhibyar ayay dawladu Ku ogaan,amarna Ku siin xawaaladaha inay kusoo wareejaan,gacanteedana Ku geli.
Halkaa markay marayso waa quusteen musharixiinta u hanqaltaagaya kursga villadu,talo farohooda waa ka baxday,waana sababta ugu weyn ee ay Ku diidanyihiin in doorasho ay natiijadeeda ogyihiin sidaa Ku galaan.
Soomaaliya 30 Sano Dowlad bay aheyd, in ka badan 30 Sano waxaay gashay goddheer oo mugdi ah, balse hadda waxaa muuqda Iftiin laga soo bixi karo Godkii mugdiga ahaa Haddii ay sii shaqeyso Dowladnimada the hadda jirta.
Soomaaliya waxaa Dhibaatada ku haya waa Danleey yar oo isticmaaleysa Qabyaalad,waxaay masab ku raadinayaan waa Qabyaalad, waa Su’aal yey wax u tartan Qabyaaladdu?
Qabyaaladda waxaa ku nool Danleey Mooryaan Calooleed ah.
Waddanku wuxuu ka dhaqaaqi la yahay waa Mooryaan Calooleed Danleey ah,islamarkaana waxaay U noqdeen Dabadhilifiin, Qaa’miin waddaniin, Jaajuusiin, Qaswadayaal, Qabyaalad ku nool, Mooryaan Qaawan iyo Tuugo u adeega Kenya iyo Emirates,iyagoo aaminsan in ay Kenya iyo and wax ka dhigi karaan kuna hanan karaan Masab Siyaasadeed oo Sare.
Maantay waxaay diidan yihiin Doorashada Soomaaliya, waxaayna Danleeydu cabsi ka qabaan iney Dowladnimada Soomaaliya guuleysato,waayo waxaay Cabsi weyn ka qabaan sharciga iyo kala dambeynta oo guuleysata,sharciga iyo kala dambeyntana waxaay ku xiran tahay Jiritaanka Dowladnimada.
Deni iyo Axmed Kenyatta Doorasho ma doonayaan,waxaayna Wakiillo u yihiin Dowlado aan marnaba dooneyn iney Soomaaliya yeelato Dowladnimo Micna leh,Dowladahaas waa Kenya iyo Emirates waxaayna isticmaalaan Horgalayaal u adeega,waana kuwa diidan Dowladaha ( Deni iyo Axmed Kenyatta).
Waa in laga hortagaa Horornimada Deni-Aaranjaan iyo Axmed Kenyatta,waana in tillaabo cad laga qaado gacan bir ahna lagu qabto Deni,Axmed Kenyatta, kuwa degan Hotel Jezeera.
Haddii Doorasho la diidey waa in la aado Doorasho Toos ah ( Hal Cod iyo Hal Qof).
Si taas loo gaaro waa in waqti kordhin loo sameeyo He’ayadaha Dastuuriga ah waqti ku filan diyaar garoobo Doorasho Toos ah,weliba nooca Doorashada ah( Proportional Representation Close List).